99 Toerana misy ny BSF Maggot Ranch • Yurie BSF
Toerana fanorenana BSG Maggot tsy misy fofona
Te hahafantatra ny toerana fanofanana Maggot sy ny toerana misy ny fambolena BSF akaiky indrindra, maoderina, tsy misy dikany ao an-tanànanao?
Ny fomba amam-panao dia ao amin'ny karazana tsanganana vidin'ny tanàna izay misy anao ankehitriny.
Ahoana ny fomba fambolena BSF
Ny fomba tsara hamboarana ny Magfot BSF hahazoana ny vidin'ny fivarotana Maggot dia dinihina tanteraka amin'ny fanomanana ireo tranom-biraon'ny BSF, mba hanangonam-bozaka.
Misy fomba maro azo ianarana momba ny fambolena BSF, ny ankamaroan'ny olona dia ny fianarana samirery na ny fomba fampianaran-tena sy ny fomba hafa amin'ny alalan'ny fanofanana fiofanana.
Misy ihany koa ny fomba hianarana ny fambolena BSF Maggot amin'ny fidirana amin'ny vondrona na vondrom-piarahamonina. Ny fomba fiasa tsirairay dia manana tombontsoa sy tombontsoa manokana.
Mifidy ny iray izay mifanandrify tsara amin'ny "style" anao. Ny sasany dia mora kokoa amin'ny fahatakarana fotsiny amin'ny famakiana, ny sasany dia te-hianatra amin'ny alalan'ny fijerena lahatsary lesona, ary ny sasany dia aleony mivantana mivantana amin'ny toeram-piompiana.
Ny fomba amam-panao amin'ny famolavolana BSF izay toerana rehetra ataonao dia tsara. Raha mbola afa-po amin'ny vokatra ianao. ary mazava ho azy fa ny vokatra eto dia afaka mahafeno ny filana fanomezana sakafo.
Rehefa manana ny kankana ianao, ankoatra ny zavatra ilaina amin'ny fikarakarana ny biby, dia mivarotra ny maggot ianao raha efa nahatanteraka ny zavatra ilainao manokana. Ankoatra ny fomba fambolena bsf bsf, ny fambolena môtô koa dia sokajiana araka ny haavon'ny orinasa.
Toeram-ponenana ao an-tokantrano
Ny sokajy fandraisam-pahaizana Magot dia zaraina ho faritra madinika (tokantrano), maitso ary indostria. Miorina amin'ny traikefa fa tsara kokoa ny manomboka amin'ny lanjany kely na ny tokantrano voalohany, ankoatra ny tsy dia mavesatra loatra ny renivohitra, ny tena manan-danja indrindra dia ny fahatakaranao voalohany ny toeram-pambolena BSF.
Ao anatin'izany dingana izany aorian'ny famolavolan'ny magot amin'ny alalan'ny cycles fahatelo sy fahefatra sy ny sisa, ny fambolena ny maggot dia lasa mahafinaritra sy mamokatra vokatra.
Manam-paharetana raha ao anatin'ny faran'ny iray, roa ary telo, eo anelanelan'ny fianarana ianao, dia tsy asaina mihinana iray tonin'ny andro raha tsy mahazo iray kilao isan'andro ianao.
Tsara ny maniry ny ho tonga saina kokoa, fa kosa ny fanatsarana ny fahaiza-manao, ny fitaovana, ny loharano ary ny mpanohana hafa.
Raha ianao no karazana te-hianatra amin'ny tenanao manokana, azafady mba araho ny fitarihana manontolo hatrany am-piandohana mba hivarotra sy hivarotra ny fako BSF
Toro-làlana momba ny fambolena BSF
Tari-dalana feno amin'ny fomba hambolena trozona
Ahoana no fomba handaminana ny Maggot ho sakafom-biby
Fanontaniana sy valiny mikasika ny fambolena kalsioma
Misafidiana fikarakarana mivantana ao amin'ny Ranch
Misy toerana 99 bebe kokoa ho an'ny MSF amin'izao fotoana izao tsy misy fofona
Fa raha tianao ny hianatra amin'ny fomba mahomby kokoa ary avy hatrany dia misy valiny. Azonao atao ny mianatra amin'ny alàlan'ny fampiharana mivantana any amin'ny toeram-pambolena iray ao amin'ny tanàna akaiky anao. Mifidy ny tanàna akaiky anao ianao mba hianatra momba ny fanao amin'ny fambolena BSG amin'izao fotoana izao.
Famolavolana tapa-tavoahangy matevina sy lehibe
Mba hanombohana raharaham-barotra maitso sy lehibe dia ny biby fiompy Maggot, mazava ho azy fa tsy maintsy manomana ny matoantenin'ny rehetra sy ny fikasana ianao.
Noho ny fanombohana biby fiompy mahazatra dia tsy azonao atao tahaka ny mora sy ny fanandramana. Ankoatra ny fandaniana fotoana, hery ary saina, mazava ho azy fa ny fahasamihafana hafa dia ara-bola.
Tsy voatery hoe ny enta-mavesatra vokatry ny tsy fahombiazana dia mety tsy ho tsara ho an'ny hoavinao. Inona ireo dingana tokony hianarana sy hahatonga antsika hisalasala rehefa mitady orinasam-barotra amin'ny sehatra midadasika?
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia mandeha amin'ny alàlan'ny dingan'ny fandraisam-bahiny aloha, avy eo dia manoritra izany ho an'ny trano na lehibe. Amin'izay dia ny fototry ny traikefa no lasa fototra fototra amin'ny fampivoarana ny orinasam-pambolena manaraka.
Ireo zavatra ara-teknika hafa alohan'ny hanombohana raharaham-barotra izay tsy maintsy ekentsika dia:
Ny fisian'ny toe-javatra mety hampidi-doza, izay midika fa mila ny fahaiza-manao ara-tsaina sy ny fiomanana amin'ny fiomanana izay tena matotra mba hahafahan'ny orinasa fambolena fingotra tsy mahafa-po dia afaka mihazakazaka tsara.
Ireo zavatra tokony hataontsika alohan'ny hanombohana fandraharahana
Mandresy lahatra ny tenanao fa ny orinasam-pambolena maggot dia tena vahaolana amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy ny vola bebe kokoa amin'ny hoavy.
Mamory ny renivohitry ny orinasan'ny BSF
Mamorona drafitra momba ny raharaham-barotra
Ireto misy zava-dehibe hafa tokony homanina
Raha manao raharaham-barotra manokana na manokana isika dia tsy mila mitady mpiara-miasa. Saingy raha te-hanangana orinasa isika dia tsy maintsy mamorona ekipa mahomby.
Atombohy amin'ny fikarohanao ireo olona izay azo atokisana, miasa am-pahibemaso ary toerana ny olona marina eo amin'ny toerana mety.
Mifantoha amin'ny fisafidianana ny karazana fivarotana Business
Safidy maro ao amin'ny orinasam-pambolena maggot, any am-piandohana dia tsy maintsy mandeha amin'ny dingana amin'ny fananganana ny famokarana maggot izay miteraka larva be sy be dia be.
Mandritra ny fotoam-pahavitrihana, ataovy azo antoka fa nanangana orinasa maoderina BSF tsy misy fofona ianao. Ny singa iray ara-barotra dia ny fiarovana sy ny fampiononana amin'ny fampandehanana izany amin'izao fotoana izao ho an'ny taona maro ho avy.
Raha mbola mipoitra ny famokarana ny famoloanao, alamino izany mba tsy hamaha olana amin'ny vahoaka. Maro ireo mpandraharaha madinika izay tsy mbola nanao ny laharam-pahamehana no mihidy noho ny fihetsiketsehan'ny fiarahamonina.
Rehefa afaka mamboly kankana tsy misy fofona, ny dingana manaraka dia ny mifantoka amin'ny sehatra manokana amin'ny business maggot.
Ireto ny vokatra azo avy amin'ny Business Maggot Business
Organic Liquid Organic
- Class A Organic Flue Organic
- Class B Organic Liquid Organic
Organic Solid Organizer
Kilasy A Zava-bozaka organika
Bozaka B solika
Maggot biby mpamokatra (Maggot Pasta, Maggot Flour. Maggot Pellet)
Ny orinasa Agro (Cosmetics, Manamboatra ny orinasa hafa, manamboatra orinasa mpamatsy sakafo)
Fampiofanana ho an'ny fambolena voajanahary
Jereo manodidina antsika
Ny vokatra rehetra sy ny tanjaky ny fandraharahana dia manana fahafahana tena tsara, jereo fotsiny ny habetsaky ny orinasam-pikarakarana biby manodidina anao.
Izany dia mampiseho ny halehiben'ny fandraisana andraikitra ara-tsakafo natsangan'ny biby.
Fidio sy ambarao ny karazan'ny orinasa tianao haleha, eritrereto tsara alohan'ny fanapahan-kevitra. Aza avela hifidy fialan-tsiny isika rehefa manaraka.
Ho lasa manam-pahaizana manokana
Inona avy ireo vokatra na serivisy tianareo omena? Ahoana ny fizarana? Ahoana ny fivarotanao azy? Iza ireo olona izay handositra izany? Inona no vidin'ny varotra fivarotana? Ahoana no amporisihanao azy?
Manomana ihany koa ny fomba fanaovana fanangonam-bokatra toy ny manintona araka izay azo atao eo imason'ny mpanjifa. Manomàna ary miomàna alohan'ny hanombohana ny business maggot.
Fantaro ny tsenan'ny Maggot (SWOT)
Manaova fanadihadiana ary ataovy famakafakana ny tsena mba hahalalanao hoe iza avy ny tsenan'ny varotrao, indrindra ireo izay ho tsena ho an'ny business maggot.
Alao ny tsikera sy ny hevitrao momba ny tsena momba ny business maggot izay efa hanombohanao. Ary tsy dia zava-dehibe loatra ny mpifaninana amin'izao fotoana izao hanomanana tetikady amin'ny fandresena ny tsena.
Misafidiana anarana momba ny orinasa
Zava-dehibe amin'ny raharaham-barotra ny anaran'ny orinasa. Misafidiana anarana izay mora tsaroana ary maneho ny ezaky ny ezaky ny BSF.
Loharanon-karena fototra Aiza ny volanao? Avy amin'ny renivohitra na renivohitra manokana ve izany? Raha ny vola nomaninao dia tsy 100% ny volan'ny tena manokana.
Avy eo dia azonao atao ny mifandray amin'ny sampan-draharaham-panjakana izay manome fanohanana ara-bola toy ny
Mitady mpampiasa vola
Manaova drafitra momba ny asa
Ny drafitra raharaham-barotra dia ny mombamomba ny raharaham-barotra momba ny raharaham-barotra, ny drafitra, ny famoronana ny fahitana sy ny iraka ataon'ny orinasa, ka ny tanjona tianao hotratrarina?
Manaova drafitra fampiroboroboana sy fivarotana ho an'ny vokatra maggot mety ho ampahany amin'ny tsena fanomezana sakafo.
Manaova drafitra momba ny raharaham-barotra amim-pitandremana, mba tsy ho sarotra amin'ny fiainana. Noho izany dia mazava tsara ny raharahanao momba ny tari-dalany sy ny tanjony ary ny vanim-potoan'ny fahombiazany.
Famaritana toerana misy orinasa
Maggot Business toerana mitady sehatra stratejika. Mitadiava toerana mora mora amin'ny fitaterana,
Manakaiky ny loharanon-karenan'ny fampitam-baovaon'ny haino aman-jery sy ny mozika, dia manohana ireo loharanom-pahefana izay feno sy mora ny mahazo asa.
Fidio tsara ireo mpiasa. Ny antony iray manan-danja amin'ny fahombiazana dia ny fahazoana mpiasa izay tsy vitan'ny miasa fa azo atokisana.
Betsaka ny orinasa mandanjalanja noho ny "olona" ao amin'ny orinasa izay manafoana sy mitarika orinasa miaina amin'ny anarany.
Fitantanana ny Fahazoandàlana momba ny varotra
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny Business dia lafiny iray amin'ny lalàna ara-dalàna eo imason'ny lalàna ary porofo fa olom-pirenena tsara ianao amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola amin'ny banky.
Famokarana teknikan'ny Maggot
Mianara ary mahatakatra ny fambolena fambolena manomboka amin'ny fanomanana ny ara-batana sy ny teorika ary koa ny dingana izay hitranga amin'ny hoavy rehefa mitrandraka io fambolena io.
Manaova Cage toy ny BSF
Ny kalesin'ny BSF dia manidina rehefa maneno sy mamerina mamokatra atody betsaka.
Ny fiompiana BSf dia singa manan-danja iray ilaina mba hanohanana ny fihazakazahan'ny fiompiana fambolena BSF.
Ny fiarovana ankavanana sy ny BSF dia hanampy amin'ny famolavolana ny atody BSF ary manampy amin'ny fanamorana ny fikarakarana isan'andro ny BSF, anisan'izany ny fananganana toeram-ponenana izay mitovy amin'ny karazana teratany avy amin'ny vorondrano mainty mirefotra.
Ny firaiketan'ny BSf dia tokony ho afaka mamorona fampiononana ho an'ny BSF. Fanitsiana Cage nankasitraka ny BSF:
Ny haben'ny habaka (làlam-barim-peo x x ary ny haavon'ny tsipika BSF)
Ho an'ny antsipirihany, jereo ny lahatsary fampianarana momba ny fomba hanaovana azy cage izay tian'ny miaramila maingoka.
Fitaovana fikarakarana sy fiomanana amin'ny fitaovana
Fanamafisana sy fitaovana manan-danja koa mba hanohanana ny fihazakazahan'ny fambolena. Fitaovana sy fitaovana toy ny:
Fahaterahana ny atody,
Ny famatsiana sy fisotroan-toerana ho an'ny lalitra BSF,
Egg sy egg incubator
Ny tranonkala fampakarana ny bioTong
Fikarakarana sakafo sy fambolena mozika
Ny iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny fambolena maggot dia ny fanangonam-bola ho an'ny fikarakarana biby hatramin'ny 82% amin'ny fandaniana amin'ny fambolena mandritra ny famokarana orinasa trondro sy sakafom-biby.
Noho izany dia ampiasao haingana ny sakafo maimaim-poana sy ny haino aman-jery tahaka ny fako aloaky ny fonenana, ny fako any an-dakozia, ny fako amin'ny fambolena sy ny legioma.
Ny haino aman-jery hafa dia mety amin'ny endriky ny dihin'ny omby, ny osy, ny bitro, ny tsimok'o, ny akoho kisoa ary ny diteo sns.
Feed sy Media
Ny Feed sy ny fampitam-baovao dia mifandray akaiky amin'ny fitomboana avo indrindra sy ny famokarana maotera sy ny fahombiazan'ny fandaniana.
Ny tsimok'aretina dia manana anjara lehibe amin'ny fitomboan'ny lanjany satria ny sakafo mahavelona manampy ny fitomboan'ny lava haingana sy matavy.
Tsy sarotra ny mikolokolo ny tsiranoka BSF maoderina tsy misy fofona, nefa mbola mitaky fitantanana sahaza. Indrindra raha ity fambolena ity dia tsy fitsarana fotsiny sy diso.
Ny atody BSF ny atody dia mety amin'ny karazana rehetra ary matetika atao amin'ny boaty kely toy ny vilany sy ranomandry na amin'ny endriky ny boaty kely.
Eto ny atin'ny BSF dia voadaka ao anaty magot ary avy eo alefa mankany amin'ny fampivoarana BioTong ...
Manomàna efitrano sy alim-baravarankely mba hametrahana ny fitoeran-javatra amin'ny fomba tsotra sy mora kokoa hanaraha-maso sy hitazonana azy isan'andro.
Ny fampiasana BioTong amin'ny sehatra midadasika dia tsy mitovy amin'ny haavon'ny trano, fa ny fitsipika dia mitoetra toy ny hoe ny BioTong dia manana ny karazana 2, BioTong tsy misy fiatoana ho toy ny fitaovana fampakarana tanora sy ny BioTong amin'ny alàlan'ny fitaovam-pandrindrana.
Ny haben'ny BioTong dia ampifanarahina amin'ny tany malalaka, mandamina azy tsara ary manomana drafitra hanitatra sy hanampy BioTong rehefa mitombo ny vokatra.
Media Management Managing
Ny fitantanana ny fitantanana ny famatsiana famatsiana sy ny haino aman-jery dia tokony homanina tsara, satria ny fampitam-baovao dia endrika fambolena voajanahary, dite biby fiompy na orinasa mpamokatra izay manana fironana amin'ny fofona manitra.